Chikamu chechipiri chechirimwa chekambani "LVM RUS" yekugadzirwa kweFrench fries ichavhurwa kutanga kwa2023 - "Potato System" magazini
в COMPANY NEWS, Kudzokorora
Mukuru weLipetsk Region Administration Igor Artamonov munaJune 3, panzvimbo yeSt. Petersburg International Economic Forum, akasaina chibvumirano neLVM RUS yekuwedzera kugadzirwa. Iko kugona kwekugadzira kweiyo iripo bhizinesi pane iyo nzvimbo yeLipetsk SEZ kuri kurongwa kupetwa kaviri.
Huwandu hwemari dzekudyara hunosvika kumadhora anodarika mabhiriyoni gumi nematatu, kuwedzera kwekugadzira kuchagadzira mamwe mabasa mazana maviri nemakumi mashanu.
“Tinofara kuti bhizinesi rakadai rine hunyanzvi hwekugadzira uye kugarisana kwevanhu riri kuwedzera mabasa aro mudunhu reLipetsk. Kwenguva yakareba isu tanga tichirwira kuvakwa kwechipiri chikamu chemuti. Isu takagadzira mamiriro, muzvinashawo akaita sarudzo, ”akadaro Igor Artamonov.
Mutsara mutsva wakagadzirirwa kushandira musika uri kukura weRussia nenyika dzeCIS. Mbatatisi dzese dzichatengwa kubva kuvarimi vemuno nerutsigiro ruzere rwekambani.
"Musika weFrench fries uri kukura pasi rese, Russia chinhu chakakosha kwatiri. Nharaunda yeLipetsk yakakosha kwazvo kwatiri, ine mikana yakawanda, zvivakwa zvakagadzirwa zvakanaka, saka takaisarudza pakuvaka chirimwa. Tiri kuronga kuenderera mberi nekubatana kwedu, "akadaro Mark Schroeder, General Director weGway Weston Meijer, mugovani mukuru weLVM RUS LLC.
Kuvakwa kwetambo yekugadzira yechipiri ichatanga gore rino. Commissioning yakarongerwa kutanga 2023.
Source: Lipetsk nguva
Tags: Gwayana weston meijerLipetsk mudunhuLLC "LVM RUS"ChiFrench fries kugadzirwa